Akụkọ - Nwepụta onwe onye, ​​na-ebu njem ahụ
Ihe ohuru nke onwe, na-ebu njem
S400 Labeling usoro maka sirinji mkpofu
• Automatic labeling & plunger nzukọ Kwụsie ọsọ: 400pcs / nkeji;
• agịga tube denesting, push mkpanaka nri, torsion mmanya & labelụ Kọmpat Ọdịdị na elu àgwà ihe;
• Nwere ike ijikọ ma ọ bụ rụọ ọrụ naanị ya;
• Miss labeling, uche koodu obibi, roba pịpu displacement nchọpụta & akpaka mwepụ;
• Nhọrọ spurt koodu, bipụta koodu, laser koodu ... online labeelu-ebi akwụkwọ unit.
• Nhọrọ spurt code, mbipụta koodu, koodu laser ... akara ntanetị obibi ntanetị;
• Automatic labeling & plunger nzukọ Anwụrụ ọsọ: 200pcs / nkeji.
E mepụtara akụrụngwa ahụ maka ogwe osisi torsion na-akpaghị aka, ihe mgbakwunye na njikọta, nchikota nchekwa ma ọ bụ akwa mkpuchi anọ na akara nke sirinji efere. Mgbe ijikọ na akpaka agịga tube stripper na akpaka osisi trimmer, Ọ nwere ike na-akpaghị aka mezue ọrụ nke agịga tube de-nesting, push mkpanaka nri, Nchikota booster, Nchikota torsion mmanya, Nchikota outerwear na labeling. Ezi torque akara ana achi achi na roba plọg adịghị ịgbanwee n'oge ịghasa, N'otu oge ahụ, anya ịchọpụta ma push mkpanaka bụ na ebe ma ọ bụ kwa uko.
Dum igwe nchọpụta ngwaọrụ iji hụ na a pụrụ ịdabere na mmepụta
1. A na-etinye ngwaọrụ nchọpụta mwepụ nke roba na ọdụ mkpanaka na-agbagharị, na ọdịiche dị n'agbata elu nke ihe nkwụ na elu nke roba nwere ike ịtọ ya na 0.2-0.5 ml ọ bụ ngwaahịa ruru eru. Ọ bụrụ na ọ dị ukwuu ma ọ bụ pere mpe karịa uru a, achọpụtara iru eru.
2. Dika ihe ndi ahia choro nwere ike hoputa sistemu nyocha ihu, usoro nyocha ihe na-anabata ụdị German Basler bubara ụdị.A na-akpaghị aka ịchọpụta mbipụta mbipụta nke mkpụrụedemede OCR na ntanetị, wee chọpụta mpempe akwụkwọ ndị na-ekwekọghị ekwekọ, ọnyá efu, na njehie .error na ndị ọzọ erughị eru ngwaahịa ka mkpu ma ọ bụ wepụ.
Top na ala Labeler, Plastic akara igwe, Sirinji Syringe na nyocha usoro, Label Printer N'ihi Ngosiputa ite karama, Commercial Bottle Labeling Machine, Label Applicator Machine N'ihi igbe,